Wararka - 6 Makiinado Si fiican Loogu Tuuro Oo Si Wanaagsan U Helay EVOMEC
Tongke Flow waxay bixisay 6 nooc oo ah bambada dhibcaha ceelka dhibcaha ee loogu talagalay EVOMEC sanadka 2019. Waa labada taayirro la dhaqaajin karo nooca mashiinka naaftada ah ee qalalan. Mashiinka Mashiinka: SPDW150, Awoodda: 360m3 / h, Madaxa: 28 m, iyo waliba qaybo tuubbo iyo dhibic fiican. EVOMEC waxay horseed u tahay injineernimada kaladuwan, dhismaha iyo howlaha saliida iyo gaaska iyadoo leh qibrad ballaadhan oo aan lala tartami karin si loo waafajiyo baaxada xirfadaheena iyo baaxada adeegyadeena mashruuc kasta ha ahaato berri ama bad. Iyagu waxay leeyihiin koox injineer ah oo aad u xirfad badan waana ku faraxsanahay inaan la shaqeyno.
Dhanka masiibada caalamiga ah, uma diri karno injineero adeega deegaanka. Kadib dadaalkii labada dhinac iyo isgaarsiinta khadka tooska ah. Waan xallinay dhibaatada ah in heerkulka bamka faakuyuhu uu aad u sarreeyo marka loo eego xaaladaha shaqada ee heerkulka sare.
Aad ayaan ugu faraxsanahay in mashiinku si fiican u shaqeynayo oo uu helay waraaqda si loogu farxo:
Waxaan awooday inaan diyaariyo dhamaan lixda cutub waxaanan tijaabiyey 3 kamid ah kuwaas oo runtii si cajiib ah u shaqeynaya !! (Muuqaalo iyo sawiro goor dhow soo socda).
Runtii waan ku faraxsanahay midkiin kasta oo soo maray mayl dheeri ah si loo gaaro kuwan. Aad baad u mahadsantahay!
Sida la ogyahay kaabayaasha, dhibcaha wanaagsan (miirayaasha) ee sida qaldan loogu talagalay, waxaan iibsaday miirayaal cusub si dib loogu dhiso (sawirada ku lifaaqan) kuwa kale si loo isticmaalo unugyada.
Waxaan u baahanahay inaan iibsado qaybo sida mashiinka mashiinka lagu shubo / matoorrada shidaalka, dareemayaasha, Qalabka wax lagu shubo iwm. Markaad tixgalinayso, Ma ii soo diri kartaa qaybo / buugaagta dayactirka ama dukumiintiyada wax ka tari kara si loo garto qaybaha saxda ah si waafaqsan. "
Waad ku mahadsan tahay daacadnimada iyo kalsoonida macaamiisha, waxaan sii wadi doonnaa inaan ku dadaalno inaan siino macaamiisha wax soo saar iyo adeegyo ka wanaagsan.